Suuriya oo ku gacansaydhay Qorshe dalalka Carbeed damacsanyihiin inay Ciidammo ugu diraan | Berberanews.com
Home WARARKA Suuriya oo ku gacansaydhay Qorshe dalalka Carbeed damacsanyihiin inay Ciidammo ugu diraan
Suuriya oo ku gacansaydhay Qorshe dalalka Carbeed damacsanyihiin inay Ciidammo ugu diraan
Syria-(Berberanews/W/wararka)- Dawladda Suuriya waxay ku gacansaydhay qorsheyaal dalalka carbeed doonayaan inay ciidammo ugu diraan dalkeeda oo ay ku sheegtay inay ku waajahayso difaac dhulkeeda oo ay kaga soo horjeedo tallaabo Milateri kasta oo lagu farogeliyo.
Wakaallada Wararka dawladda taabacsan ee SANA, ayaa Wasiirka Arrimaha Debedda Syria ka soo xigatay inuu wadanka Syria naxdin ku noqotay hadal ka soo yeedhay hoggaamiyaha dalka Qatar oo waraysi ku uu bixiyay uu ku taliyay in dalalka carabtu awood Milateri u addeegsadaan joojinta rabshadaha mudada dhawrka billood ka socda dalak Syia ee lagaga soo horjeedo hoggaamiyaha dalkaas.
Wasiirka Arrimaha Debeddu waxa uu intaa raaciyay in hadallada ka soo yeedhay Qatar ay xaaladda uga sii dari karaan, islamarkaana dili karta xidhiidhka wada-shaqayneed ee Syria la wadaagto dalalka Carabta.
Hoggaamiyaha Qatar Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, ayaa mar uu u warramayay shalay Telefiishan laga leeyahay dalka Maraykanka, waxa uu soo jeediyay in ciidammo Carbeed loo diro Syria, si ay u joojiyaan qalaalasha joogtada ah.
Previous articleGuddoomiye Ku-xigeenka Baarlamanka Kenya oo Somaliland u soo jeediyey talooyin ku saabsan Shirka Taleex iyo dagaalk Buuhoodle
Next articleWarbaahinta iyo Doorka ay ka Qaadatay Dagaalkii Ciraaq